China 65 Steel Frame Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
65 Rafitra rindrina vita amin'ny vy dia rafitra rafitra sy manerantany.Ny volom-borona mahazatra amin'izy ireo dia ny lanjany maivana sy ny fahafahan'ny entana avo lenta.Miaraka amin'ny clamp tsy manam-paharoa ho toy ny connecteurs ho an'ny fitambarana rehetra, ny asa fanamboarana tsy sarotra, ny fe-potoana fanakatonana haingana ary ny fahombiazana ambony dia vita soa aman-tsara.
Ity dia rafitra modular formwork voarafitra
Izy io dia noforonin'ny tontonana Formwrok sy Accessories.
Panel forwork: Rafitra vy vita amin'ny plywood 15mm
Rafitra vy: Q235B (GB/T700-2007)
Plywood: hazo mafy tsara kalitao na sarimihetsika Eucalyptus miatrika plywood amin'ny 15mm.
Fanerena simenitra avela: 90 kN/㎡
Ny halaviran'ny lavaka fanitsiana dia 50mm.Fampitomboana fanitsiana kely indrindra izany.
Asio tombo-kase ireo lavaka tsy ampiasaina ao amin'ny takelaka formwork amin'ny takelaka Universal miaraka amin'ny plug R 20.
Ny drafitry ny anay anefa diaTsotra no tsara indrindra,9 ihany no tontonana formwork habe mahazatra: 3000x1200;3000x950;3000x600;1200x1200;1200x950;1200x600;
600x1200;600x950;600x600;(Araka ny sary manaraka)
Fanamarihana: ny max miasa sakany of iray mpitovo tontonana tokony be Kely kokoa 150mm noho ny ny panel sakany.
Ny tontonana dia azo ampifandraisina amin'ny haavony sy ny sakany rehetra mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny toeram-piasana.
Fomba fanitsiana ny refin'ny tsanganana: (Fizarana amin'ny tsanganana)
Vahaolana amin'ny rindrina
1. Coupler tsanganana
Column coupler dia ampiasaina ho an'ny vertika mampifandray roa formwork tontonana, izany dia noforonina amin'ny hidin-trano sy ny voanjo kapila.
Fampiasana: Ampidiro ny tsorakazo hidin-trano hanitsy ny lavaka,
Hanova ny toeran'ny tsanganana coupler amin'ny alalan'ny fanitsiana lavaka, dia 4 formwork tontonana surrond faritra dia hanova ny refy.Mba mety amin'ny fampiharana tsanganana habe samihafa.
Ny clamp mahazatra dia ampiasaina amin'ny fampifandraisana tontonana roaformwork hanitarana ny faritra sy ny haavony.Tsy ampiasaina fotsiny amin'ny fampifandraisana ny tontonana formwork, fa ampiasaina koa amin'ny fampifandraisana tohatra, caster, rebar regulator, ity dia famolavolana multifunction, mba hahamora kokoa amin'ny toeram-piasana.
3. Coupler fampifanarahana
Alignment coupler no ampiasainamampifandray roa formwork tontonana, fa koa manana aligned asa.Izy io dia fanamafisana ny clamp mahazatra mifandray.
Ampy ny fanidy sy ny famotsorana ireo fitaovana ireo.Manatsara ny fahombiazan'ny asa, manatsotra ny asa.
4. Tohatra & Sehatra fiasana
Miasa fidirana amin'ny fanaraha-maso simenitra fandatsahana, ny endri-javatra toy izao manaraka izao:
Ampiasao ny sodina vy mahazatra ho toy ny taila fa tsy ny famolavolana natao manokana.Araraoty tanteraka ny fitaovana ao amin'ny toeram-piasana.
Mampiasà clamp fasten (C-clamp) mitovy amin'ny fehin-tanana sy hazo fisaka metaly, famolavolana multifunction.
Ampiasao ny fomba fampifandraisana mitovy amin'ny tontonana sy ny tohatra (amin'ny clamp mahazatra).Avelao ny tohatra hitsangana sy hifindra haingana.
Sketch amin'ny sehatry ny asa:
3-1 : Fenitra
3-2 : Hazo metaly
Handrail mampiasa sodina vy mahazatra.
Enta-mavesatra azo atao: 1,5 kN/㎡ (150kg/㎡）
Ampidiro ny kilasy 2 hatramin'ny EN 12811-1:2003
5. Kodiarana (Caster)
Amin'ny fampiasana bolts na clamp hampifandray amin'ny tontonana formowrk, manodiho ny tahony, azonao atao ny manainga ny suite formwork, mora mihetsika, na dia mavesatra kokoa aza ny formwork, olona 1 na 2 monja no afaka mamindra azy mora foana, avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa haingana ary moramora, tsy mila amboarina ho an'ny tsanganana tsirairay, mandritra izany, mampihena ny vidin'ny fampiasana vano.Satria azo esorina mora foana izy io, azo zaraina ho an'ny suite formwork maro ny andiany iray, afa-tsy ny vidiny.
Mba hitazonana ny efitranon'ny formwork ho mafy orina, azo antoka ary mora ampiasaina, dia natao karazany 2 izy io.Mampiasa karazana rib-connection 2 sy karazany 1 side-connection amin'ny suite formwork antsasa-tsanganana.
Ampifandraiso amin'ny clamp Standard
6. Crane hook
Omeo toerana fisandratana ho an'ny tontonana formwork.Ampifandraiso amin'ny taolan-tehezan'ny tontonana amin'ny alàlan'ny bolt.
Ampiasaina mba hiantohana ny toeran'ny rebar mba hisorohana ny dislocation.Mampiasà profil miendrika mitovy miaraka amin'ny framework, mora ampifandraisina sy rava amin'ny clamp mahazatra.
7. Chamfer strip
8. tosika misintona
Tazony sy amboary ny zoro mitsangana amin'ny alàlan'ny fametahana ny formwork.
Ampifandraiso amin'ny bolt ny formwork ary raikitra amin'ny taolan-tehezana.Ny faran'ny iray hafa dia amboarina amin'ny simenitra mafy amin'ny alàlan'ny bolt vatofantsika.
Ny faritra sasany dia manana fitsipika fiarovana amin'ny zoron'ny singa fanorenana, tsy afaka miseho ny zoro maranitra.
Ny fomba nentim-paharazana dia ny fampiasana ampahany telozoro amin'ny hazo mba hofantsihana amin'ny sisin'ny formwork.
Ity chamfer strip ity dia azo apetraka eo amin'ny sisin'ny tontonana formwork, tsy mila fantsika hanamboatra.
1. Anatiny zoroNy zoro elastika dia avelao ny formowrk hikorontana mora kokoa amin'ny hery ampy.
2. Tsy misy zoro ivelany famolavolanaNy zoro ivelany dia tsy ilaina, nahoana no mila kojakoja bebe kokoa rehefa manana endrika coupler tsara isika?
3. Voambolana ZoroMitovitovy amin'ny hinges, avelao ny fananganana zoro hafa azo atao.
4. Famenoana fitaovana mpampitohy
5. Fenoy clampAmboary haingana ny elanelana tery amin'ny fitaovana famenoana.Haavo: 0 ~ 200mm
6. Waler clampAmpifanaraho ny tontonana rehetra rehefa mitsangana sy mitsangana.
7. lafiny tokana mpanohanaB-form ho an'ny rindrina tokana hatramin'ny 6m
Tsotra, mora ary azo antoka ny mampifandray mpanohana amin'ny tontonana formwork
Fivoriambe Shear Wall
Momba ny tontonana surface:
Ny tontonana ambonin'ny B-endrika dia 12mm sarimihetsika miatrika plywood.Fantatsika fa voafetra ny androm-panompoan'ny plywood, satria matetika dia azo ampiasaina in-50 eo ho eo amin'ny frame B-form.
Midika izany fa mila manova plywood vaovao ianao.Raha ny marina dia tena mora sy mora.Dingana 2 ihany: Rivet;Sisiny tombo-kase
Rivet jamba (5*20)
Ny rivet dia tokony ho vatofantsika amin'ny takelaka vatofantsika.(Pila telozoro kely ao anaty frame)
Momba ny haben'ny fanapahana:
Fantatray fa ny haben'ny plywood mahazatra dia 1220x2440mm (4' x 8')
Ny haben'ny B-form mahazatra dia 3000mm ny halavany.Afaka mampifandray panel 2 izahay.Ny rafitra vy dia efa voaomana tsara
"plate vatofantsika" (telozoro kely toy ny sary etsy ambany).Avelao hitambatra amin'ny taolan-tehezana.
Noho izany, ny tontonana 3m dia tokony ho tapaka 2388mm + 587mm
Ny takelaka B-endrika hafa dia afaka mampiasa plywood integral.
Ny haben'ny plywood dia tokony ho fohy kokoa 23 ~ 25mm noho ny takelaka B-form
Ohatra amin'ny endrika:
B-endrika 1200mm ---- plywood 1177mm
B-endrika 950mm ---- plywood 927mm
B-endrika 600mm ---- plywood 577mm
teo aloha: Wing Nut
Manaraka: 120 Rafitra vy